Indawo entle yokuhlala ixesha elide
Igumbi lokulala eli-2 elipholileyo entliziyweni yesixeko elinazo zonke izinto eziyimfuneko. Kumgama wokuhamba ukuya kuzo zonke iindawo ezilungileyo (iibhari, iindawo zokutyela, iindawo ezinomdla, njl);ibhalkhoni ejonge kweyona flegi iphakamileyo emhlabeni. Imizuzu eyi-13 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya
Yindawo entle apho wonke umntu angaziva ekhululekile ngenxa yezibonelelo kunye nezinto eziluncedo. I-appartment ilungele abantu abangatshatanga kunye nabatshatileyo kunye nakwizibini ezinabantwana. I-Apartment ikwindawo entle esembindini. Umntu unokuhamba phantse kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi kubandakanya iibhari kunye neeresityu, imyuziyam yesizwe kunye nethala leencwadi, iithiyetha, iziko lokurhweba (TCUM), eyona nto iphezulu iflegi, iipaki kunye nezinye iindawo ezininzi.
Uya kuthanda ukuhlala kwindawo ngenxa yendawo yokuhlala. Kumgangatho wokuqala wesakhiwo uya kufumana indawo ethandekayo yokutya / yokusela okanye uzipholise kancinci. Kwakhona kukho iBhanki apho yonke imisebenzi yebhanki ifumaneka kude kube sebusuku (kuquka utshintshiselwano lwemali). Kukho igrosari kunye nezinye iivenkile ezahlukeneyo ngaphaya kwendlela kwakhona kuhambo lwe-7-10 min ungafumana ivenkile enkulu.
Ndifumaneka ngefowuni, i-imeyile, umyalezo obhaliweyo njl.